အသည်းကွဲပါများလာတဲ့အခါ အချစ်အပေါ် ဒီလိုမြင်သွားကြတယ်… – Trend.com.mm
အချစ်ရေးကံမကောင်းလို့ အသည်းခဏခဏကွဲနေတဲ့အခါ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့ရဲ့အတွေးအမြင်တွေဟာ ပြောင်းလဲလာကြပါတယ်။တကယ်လို့
သင်ဟာ အသည်းကွဲဖူးတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်၊ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်မိတဲ့အခါ ဒီလိုအရာတွေအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
အသည်းကွဲပါများလာတဲ့သူတွေ အချစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုတွေမြင်လာကြလဲ?
*သူ/သူမ အနားချဉ်းကပ်လာသူတွေကို သံသယနဲ့ပဲ ကြည့်တတ်လာတယ်
*ကိုယ်နဲ့ တွေ့ဆုံလာသမျှသူတွေရဲ့ ဆိုးကွက်တွေကိုသာ အာရုံစိုက်မြင်တတ်လာတယ်
*ဘာဖြစ်ဖြစ် တိုက်ခိုက်တွန်းလှန်ဖို့ထက် အလွယ်တကူပဲ အရှုံးပေးတတ်လာတယ်(ထပ်မချစ်ရဲတော့တာမျိုး)
*အချစ်စစ်ဆိုတာ တကယ်ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်လက်ခံဖို့ ခက်လာတယ်။
*တော်ရုံတန်ရုံခံစားချက်တွေကို မျှဝေမပြောပြတတ်တော့ဘူး။စိတ်ထဲမှာပဲ အမြဲသိမ်းထားတတ်လာတယ်
*လူတစ်ယောက်ကို ထပ်ချစ်ရမှာ ကြောက်လာတယ်။ဒါကြောင့် စိတ်ထဲကသံယောဇဉ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တောင် ဝေးဝေးကိုရှောင်ပြေးလာတယ်။ဒီတစ်ခါလည်း
*နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ အချစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ သူမလက်ခံယုံကြည်ထားတာတွေဟာ မှားယွင်းနေတယ်လို့သက်သေပြမယ့်တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သူမစိတ်ထဲကနေ တိတ်တိတ်လေးမျှော်လင့်တတ်လာတယ် (သူမရဲ့တကယ့်အတွင်းစိတ်ကတော့ အချစ်စစ်ဆိုတာရှိတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ)
ဒီလိုအတွေးအမြင်တွေဟာ အသည်းကွဲပါများလာတဲ့အခါ ၀င်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ဒီလိုအတွေးတွေရှိနေတဲ့သူတစ်ယောက် ကိုယ့်အပေါ်ချစ်လာအောင်
လုပ်ဖို့ဆိုတာ တကယ်မလွယ်ပါဘူး။သူတို့ ကိုယ့်အပေါ်ချစ်လာအောင်လုပ်နိုင်မယ့်နည်းက ဒီအချက်တွေက မှားယွင်းနေတဲ့အကြောင်း သူမယုံအောင်
သက်သေပြ ချစ်ပေးဖို့ပါပဲ (အချစ်စစ်မှန်ရင်တော့ သူတို့ရဲ့စိတ်ကို အရယူနိုင်မှာပါ)။တော်ရုံနဲ့လက်လျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ သူမရဲ့ အခုယုံကြည်ချက်တွေက
ကဲ ဘယ်လိုလဲ သူတို့ရဲ့အချစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရယူဖို့ သင့်အချစ်ကိုယ်သင် ယုံကြည်မှုရှိရဲ့လား?
အခဈြရေးကံမကောငျးလို့ အသညျးခဏခဏကှဲနတေဲ့အခါ အခဈြနဲ့ပတျသကျပွီး သူတို့ရဲ့အတှေးအမွငျတှဟော ပွောငျးလဲလာကွပါတယျ။တကယျလို့
သငျဟာ အသညျးကှဲဖူးတဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျ၊ယောကျြားလေးတဈယောကျကို ခဈြမိတဲ့အခါ ဒီလိုအရာတှအေတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျထားသငျ့ပါတယျ။
အသညျးကှဲပါမြားလာတဲ့သူတှေ အခဈြနဲ့ပတျသကျလို့ ဘယျလိုတှမွေငျလာကွလဲ?
*သူ/သူမ အနားခဉျြးကပျလာသူတှကေို သံသယနဲ့ပဲ ကွညျ့တတျလာတယျ
*ကိုယျနဲ့ တှဆေုံ့လာသမြှသူတှရေဲ့ဆိုးကှကျတှကေိုသာ အာရုံစိုကျမွငျတတျလာတယျ
*ဘာဖွဈဖွဈ တိုကျခိုကျတှနျးလှနျဖို့ထကျ အလှယျတကူပဲ အရှုံးပေးတတျလာတယျ(ထပျမခဈြရဲတော့တာမြိုး)
*အခဈြစဈဆိုတာ တကယျရှိတယျလို့ ယုံကွညျလကျခံဖို့ ခကျလာတယျ။
*တျောရုံတနျရုံခံစားခကျြတှကေို မြှဝမေပွောပွတတျတော့ဘူး။စိတျထဲမှာပဲ အမွဲသိမျးထားတတျလာတယျ
*လူတဈယောကျကို ထပျခဈြရမှာ ကွောကျလာတယျ။ဒါကွောငျ့ စိတျထဲကသံယောဇဉျဖွဈပွီဆိုရငျတောငျ ဝေးဝေးကိုရှောငျပွေးလာတယျ။ဒီတဈခါလညျး
*နောကျဆုံးအခကျြကတော့ အခဈြနဲ့ပတျသကျလို့ သူမလကျခံယုံကွညျထားတာတှဟော မှားယှငျးနတေယျလို့သကျသပွေမယျ့တဈစုံတဈယောကျကို သူမစိတျထဲကနေ တိတျတိတျလေးမြှျောလငျ့တတျလာတယျ (သူမရဲ့တကယျ့အတှငျးစိတျကတော့ အခဈြစဈဆိုတာရှိတယျလို့လကျခံယုံကွညျဖို့ကွိုးစားနတောပါ)
ဒီလိုအတှေးအမွငျတှဟော အသညျးကှဲပါမြားလာတဲ့အခါ ဝငျရောကျလာတတျပါတယျ။ဒီလိုအတှေးတှရှေိနတေဲ့သူတဈယောကျ ကိုယျ့အပျေါခဈြလာအောငျ
လုပျဖို့ဆိုတာ တကယျမလှယျပါဘူး။သူတို့ ကိုယျ့အပျေါခဈြလာအောငျလုပျနိုငျမယျ့နညျးက ဒီအခကျြတှကေ မှားယှငျးနတေဲ့အကွောငျး သူမယုံအောငျ
သကျသပွေ ခဈြပေးဖို့ပါပဲ (အခဈြစဈမှနျရငျတော့ သူတို့ရဲ့စိတျကို အရယူနိုငျမှာပါ)။တျောရုံနဲ့လကျလြှော့လိုကျမယျဆိုရငျတော့ သူမရဲ့အခုယုံကွညျခကျြတှကေ
ကဲ ဘယျလိုလဲ သူတို့ရဲ့အခဈြကိုပိုငျဆိုငျရယူဖို့ သငျ့အခဈြကိုယျသငျ ယုံကွညျမှုရှိရဲ့လား?
Netflix မှာပြသတော့မယ့် Ultraman Season 1 (Trailer)